Fifidianana ben’ny Tanàna: hanapa-kevitra ato ho ato ny fitondrana - ewa.mg
News - Fifidianana ben’ny Tanàna: hanapa-kevitra ato ho ato ny fitondrana
Mby aiza ny fanatanterahana fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna? Mbola mahabe adihevitra. Hanapa-kevitra ato ho ato ny fitondrana
“Ny zavatra hataontsika, hisy fanapahan-kevitra amin’ity herinandro ity na amin’ny herinandro ho avy. Tsy maintsy manapa-kevitra amin’ny filankevitry ny minisitra momba izay fotoana tokony hanaovana ny fifidianana ben’ny Tanàna izay.”
Io no nambaran’ny filoha Rajoelina Andry teny Anosy, omaly, momba ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna. Mila hanontaniana aloha ny antoko nilaza fa tsy tokony hatao amin’ity taona ity ny fifidianana. Satria nisy antoko nilaza fa raha hatao amin’ity taona ity io fifidianana ben’ny Tanàna io, tsy handray anjara ry zareo.
Hanontaniana koa ny Ceni ny amin’ny fahitany azy: madio tokoa ve ny lisi-pifidianana?
“Miroso amin’ny fifidianana tokony hatao isika, rehefa madio ny lisi-pifidianana ary vonona hiroso amin’izany isika”, hoy izy. Tsy misy ny olana na natao amin’ity taona ity io, na amin’ny taona ho avy. Rehefa mifanaraka ny rehetra hoe: miroso rehefa hiroso, aleo ny vahoaka no hisafidy. Hatao fifidianana rehefa izay no hifanarahan’ny besinimaro. Mino izy fa vonona avokoa ny antoko rehetra hiatrika an’izany.
Ara-dalàna ny hatao.
Zavatra manara-dalàna no tokony hatao, araka ny nambarany. Ny Ceni no mamaritra ny daty tokony hanaovana ny fifidianana, ary iaraha-midinika amin’ny minisitry ny Atitany. Toy ny rehetra ihany izy, nahare fa misy antoko nilaza ny mbola tsy tokony hanaovana ny fifidianana ben’ny Tanàna aloha, fa mila jerena ny lisi-pifidianana. Izay no ataon’ny Ceni: mijery ny lisi-pifidianana.
Vokany, tsy fantatra intsony hoe: hatao ve ny fifidianana sa tsia? “Izao ny zavatra mampihomehy sy mahagaga eto amintsika: zatra manohitra hatrany ny zava-mitranga isika”, hoy ihany izy. Rehefa milaza isika hoe tokony hiroso, miteny ny sasany hoe mijanona aloha fa aza mbola miroso.
Tsy misy eritreritra hanendry PDS
“Vaovao tsy marina sy tsy mitombina izany, satria tsy misy manana eritreritra hanolo PDS ny ben’ny Tanàna”, hoy izy momba ny fanendrena PDS. Anjaran’ny vahoaka ny mijery raha nahavita ny asany na tsia ny ben’ny Tanàna tao anatin’ny efa-taona nitantanany. Anjaran’ny vahoaka koa ny manapaka ny amin’izay amin’ny fifidianana: iza ny ben’ny Tanàna tena mahavita azy, tena afa-kampandroso ny firenena?
L’article Fifidianana ben’ny Tanàna: hanapa-kevitra ato ho ato ny fitondrana a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 07/08/2019
“Podium 26 jona”: eo amin’ny Tsangambaton-dRalaimongo
Hiova ny hetsika ara-kolontsaina fanamarihana ny fankalazana ny niverenan’ny Fahaleovantena. Ho etsy amin’ny Tsangambaton-dRalaimongo ny « Poduim » lehibe, hiakaran’ireo mpanakanto maro, ahitana teratany vahiny koa. Efatra andro mialoha ny fankalazana ny 26 jona ny hetsika rehetra ho hita eo amin’io toerana io.Efa hiandry ireo mpijery afomanga avy eny amin’ny farihin’Anosy amin’ny 8ora sy sasany alina io sehatra lehibe io ny harivan’ny 25 jona.Tsy hisy intsony izany ny hetsika ara-kolontsaina fahita sy efa fanao isan-taona eny anivon’ny boriborintany enina eto an-dRenivohitra amin’ny alalan’ireo mpanakanto samihafa. Araka izany, niova endrika sy fomba fanao ny fitondrana amin’ity indray mandeha ity. Miara-misalahy amin’izany ny fanatanterahana ny hetsika fankalazana ny faha-59 taon’ny niverenan’ny Fahaleovantena izany ny minisitera efatra sy ny fiadidiana ny Repoblika ary ny komity mpanomana.Synèse R. L’article “Podium 26 jona”: eo amin’ny Tsangambaton-dRalaimongo a été récupéré chez Newsmada.
Toamasina: “Héroïnes” milanja 40 kilao saron’ny ladoany
“Héroïnes » manodidina ny 40 kilao teo no tratran’ny ladoany ( Service de la surveillance et de la lutte contre la contrebande, Brigade des stups) tany Toamasina, omaly. Niara-niasa ny CSI (Comité pour la sauvegarde de l’intégrité), le CRFIM (Centre régional de fusion d’informations maritimes) nampian’ny FIP sy ny zandary no nahasarona ity tambazotra ity.Efa tao anaty fiara 4×4 iray saika hiala tany Toamasina no tratra ireo zava-mahadomelina ireo. Tao anaty valizy nafenina anaty lamba. Rehefa nosavaina ilay fiara ka tratran’ny manampahefana tamin’izany. Olona maromaro no voasambotra ary mandeha ny famotorana.Tranga mahazo vahana eto amintsika ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina mahery vaika. Matetika any Maorisy no misy olona tratra avy aty amintsika. Fantatra fa firenena andalovan’ny “Héroine” eto amintsika, ary mandeha any amin’ny firenena hafa avy eo. Efa maro ihany koa anefa ny manjifa azy ity eto amintsika, ary miparitaka eto an-dRenivohitra izany.Yves S. L’article Toamasina: “Héroïnes” milanja 40 kilao saron’ny ladoany a été récupéré chez Newsmada.
“Clip”- Jona Liona: hivoaka anio ny “Maboto”
Mozika mafana … Hi­voa­ka anio asabotsy 30 janoary ny hira arahina rindrantsary “Maboto” an’i Jona Liona. Mpanakanto avy any amin’ny faritra atsinanana any izy ary mivoy ny gadona “dancehall”.Hira maharitra eo amin’ ny 3 minitra sy 26 se­gaondra izy ity. Miresaka ny za­vatra rehetra misy eny amin’ ny fiarahamonina ambany ta­nà­na, ny fiainana iainan’izy ireo, ny hetahetany, ny fomba fijeriny ny tontolo manodidina… Hira fahadimy vita rindrantsary ity hivoaka, anio, ity raha ny “par la tour”, ny “Mapoka”, ny “Maman’ny zaza” ary ny “Dawawa” no mandehandeha any.Eo am-panomanana ny ra­ki­kira ihany koa i Jona Liona, ary anisan’ ny ho ao anatin’ izany ity hira ity. Tanjon’ny tovolahy ny handeha lavitra eo amin’ny tontolon’ny mozika malagasy. Misokatra amin’ ny fiaraha-miasa rehetra ny tenany, indrindra eo amin’ny tontolon’ny mozika. Manana ny tambajotran-tserasera facebook “Jona Liona Officiel” izy ho an’izay liana amin’ny zavatra ataony.NarilalaL’article “Clip”- Jona Liona: hivoaka anio ny “Maboto” a été récupéré chez Newsmada.
Conservatoire national de Madagascar: omena vahana kokoa ny maha Malagasy
Fampianarana mozika ! Manomboka manana ny lanjany eo amin’ny Malagasy. Ho an’ny toeram-pampianarana tantanan’ny fanjakana, tafatsangana ny Conservatoire national de Madagascar. Manana izay heveriny ho laharam-pahamehana ny mpitantana azy ity… Sambany eo amin’ny tantaran’ny fampianarana mozika… Taona 2016, nivoaka ny didim-panjakana manambara ny fijoroan’ny Conservatoire National de Madagascar. Ahitana taranja maromaro ny ianarana ao anatiny. Maro mifandraika amin’izay rahateo ny zavamaneno ampianarina ao anatiny. Anisan’izany ny piano, ny gitara, ny valiha, ny flûte, ny kabôsy, ny violon, ireo zavamaneno tsofina. Miampy dihy isan-karazany toy ny dihy malagasy, ny dihy ankehitriny, ny klasika, ny fianarana ny Qi Gong, sns. Raha ny fanazavan-dRatovo Andriamary Luc Olivier, talen’ny Conservatoire national de Madagascar : «omena vahana sy lanja kokoa ny maha Malagasy eo anivon’ity toeram-pampianara ity. Izay ny anisan’ny tombony sy mampiavaka ny CNM raha oharina amin’ny « conservatoire » hafa any ivelany ». Nohamafisiny fa « rariny izany satria an’i Madagasikara izy ity ». Manana karazana gadona sy hira maro ny Malagasy. Ireny no anisan’ny ianarana ao amin’ny Conservatoire national de Madagascar. Ireny ihany koa no hiompanan’ny fikarohana sy fandalinana hatao eo anivon’izany CNM izany. Nohamafisin’ny talen’ny CNM fa « anisan’ny anjara andraikitry ny Conservatoire national de Madagascar ny manangona sy mitahiry ireny mozika mampiavaka an’i Madagasikara ireny. Mila hangonina izy ireny. Mila soratana solfezy ihany koa ». Na izany aza, amin’ny maha toeram-pampianarana mozika manana fivelarana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny CNM, ianarana ao ihany koa ny mozika na hira na gadona hafa, fantatra maneran-tany. Fiaraha-miasa amin’ny Sinoa mpanakanto Raha ny fanazavan’ny talen’ny CNM hatrany, anisan’ny taranja ampianarina ao amin’ity ivontoerana ity ihany koa ny “qi gong”. « Anisan’ny fifanakalozana koltoraly ifanaovana amin’ny Sinoa mpanakanto izy io. « Raha ny vina, mety hisy mpanakanto avy any Sina handalo eto Madagasikara hitrandraka sy hifanakalo amintsika eto Madagasikara », hoy hatrany Ratovo Andriamary Luc Olivier. « Mifameno tanteraka amin’ny fianarana mozika sy dihy ny “qi gong” », hoy Randrianarisoa Claude Justin, hampianatra ity taranja ity eo amin’ny Conservatoire national de Madagascar. Anisan’ny soa azo avy aminy, ohatra, ny firindran’ny fahasalamana, ny fahatsiarovan-tena sy ny fahaiza-miaina. Ny fahaiza-mihaino sy mahatsapa ny fisian’ny hafa. Notsiahiviny tamin’izany fa mitondra vokatra tsara ny fanaovana «qi gong» mialoha ny hampiasana (hitendrena na hitsofana…) zavamaneno. HaRy RazafindrakotoL’article Conservatoire national de Madagascar: omena vahana kokoa ny maha Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Vaovao ratsy ho an’ny Barea: enim-bolana tsy milalao i Fontaine
Vaovao ratsy ho an’ny Barea de Madagascar. Maratra ary tsy afaka ny hilalao mandritra ny enim-bolana ilay vodilaharan’ny Barea de Madagascar, i Thomas Fontaine, milalao ao amin’ny FC Lorient. Fantatra mantsy fa naratra ny tovolahy nandritra ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Frantsa, izay nikatrohany tamin’ny Paris St Germain, ny herinandro lasa teo.Voadona teo amin’ny kitrokeliny ny tovolahy tamin’izany ary tsy afaka hiakatra kianja intsony. Araka ny fantatra, hodidina amin’ny volana janoary i Thomas Fontaine. Araka izany, tapitra ihany koa izany ny fiarahany amin’ny Barea de Madagascar. Tsy afaka hiatrika ny fifanandrinana amin’ireo lalao roa farany, amin’ny fifanintsanana ny Can 2021, izy izany. Fihaonana tanterahina any Etiopia, ny volana marsa ary ny fandraisana an’i Niger, ny faramparan’io volana io ihany, eto Madagasikara. Tsiahivina fa 29 taona i Fontaine ary vodilaharana andrin’ny Barea de Madagascar. Tompondaka L’article Vaovao ratsy ho an’ny Barea: enim-bolana tsy milalao i Fontaine a été récupéré chez Newsmada.
Fanomezan-kasina ny teny malagasy : mitohy anio ny « Dinika amorom-patana »
Ho an’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany, tsy nijanona tamin’ny “Volan’ny teny malagasy” (volana jona) ny hetsika fa mitohy hatrany… Mila omen-kasina isan’andro ny teny malagasy. Anio 01 aogositra, manomboka amin’ny 4 ora hariva, hisoron’afo amin’ilay takalo “Dinika amorom-patana” indray ny Dr. Nalisoa Ravalitera, akademisianina sady mpampianatra mpikaroka . Lohahevitra hanafanany ny dinika amin’izany : “Ny fam­piasana ny hainteny eo amin’ny kabary”. Mbola ao anatin’ny fihibohana ny ankamaroan’ny firenena, noho izany, amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera “zoom” no hanatanterahana ny “Dinika amorom-patana”. Noho izany, mila misoratra anarana mialoha izay handray anjara amin’ny dinidinika satria voafetra iha­ny ny isa noho ny fandrindrana teknika tsy maintsy atao. Azon’ny rehetra arahina kosa anefa ny fizotry ny “Dinika amorom-patana”. Marihina fa afaka mandray avokoa ny olon-drehetra na aiza na aiza ny firenena misy azy fa kendrena tsara kosa mba hifanaraka amin’ny oran’i Madagasikara ny fa­nombohana. Amin’ny 3 ora, ohatra, raha any Frantsa ilay mpandray anjara no monina.HaRy RazafindrakotoL’article Fanomezan-kasina ny teny malagasy : mitohy anio ny « Dinika amorom-patana » a été récupéré chez Newsmada.
Na liana aza…: “Sakana ny tsy fahampian’ny vola”
Manomboka mitodika any amin’ny fitiavana ny kolontsaina malagasy ny Malagasy. Na izany aza, “mbola mitoetra ho sakana hatrany ny tsy fahampian’ny vola”, raha ny velakevitra notontosain’ireo raiamandreny sy mpampianatra ary mpikaroka momba ny kolontsaina sy ny fomba malagasy, ny asabotsy teo. Nomarihin’izy ireo anefa fa “tokony hisy hasina hatrany ny zavatra atao amin’ireny kolontsaina sy fomba amam-panao malagasy ireny”. Nataon’izy ireo ho ohatra amin’izany ny fampianarana. Tsy azo jerem-potsiny ireo mampianatra mampita fahalalana (fomba amam-panao, kolontsaina sy zavakanto…), fa tsy maintsy toloran-kasina.Nomarihin’izy ireo anefa fa “raha vao misy resaka vola, mihemotra avy hatrany ny ankamaroan’ny Malagasy satria tena ao anatin’ny fiainana mafy ny vahoaka. Na liana aza izy ireo, tsy laharam-pahamehana aminy ny fomba amam-panao, ny kolontsaina, ny zavakanto…” Izay no nahatonga ireto mpikaroka, mpampianatra, mpandala ny nentin-drazana, raiamandreny ireto nanao antso avo ho an’ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga mba hampiditra ao anaty fandaharam-pianarana ny taranja: “fiverenana eny an-doharano”.HaRy RazafindrakotoL’article Na liana aza…: “Sakana ny tsy fahampian’ny vola” a été récupéré chez Newsmada.
Polisy iray nanararao-pahefana…: renim-pianakaviana maty tao anaty «violon»
Fisakanana ny vadiny tsy hiara-kisotrosotro amin’ny polisy, ny andron’ny taom-baovao teo, no nahatonga ny fifamaliana teo amin’ity renim-pianakaviana sy ny polisy iray, tao Manandriana, ka nampidiran’ity farany azy tao amin’ny “violon”. Namoy ny ainy tao anefa ity ramatoa ity, noho ny aretim-po efa nitaiza azy. Fanararaotam-pahefana ? Ramoha Armine ny anaran’ity renim-pianakaviana namoy ny ainy noho ny fanararaotam-pahefana nataon’ny polisy iray miasa ao amin’ny kaomisarian’i Mandriana ity, ny faran’ny herinandro teo. Raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, nifamaly tamina polisy iray noho fanakanany ny vadiny tsy hisotro toaka hiaraka amin’ity polisy ity no antony nahatonga ity raharaha ity. Midaroka sy miady aminy ilay vadiny isaky ny avy misotro toaka ka antony tsy namelany am-badiny hiaraka tamin’ity polisy ity tamin’io fotoana io. Teo no niteraka ny fifamaliana ka nahatonga ilay polisy nampiditra azy tao amin’ny violon ny 1 janoary 2021. Voalaza fa tsy tao an-toerana ny lehiben’ny kaomisaria tamin’io fotoana nitrangan’ny fifamaliana io. Nolazain’ireo fianakaviany fa manana aretim-po mitaiza ity renim-pianakaviana ity rehefa avy nifamaly tamin’ilay polisy izy dia nampidirana violon ka navoakany indray rehefa hariva ary naverina nampidirina violon indray ny alina manontolo. Ny asabotsy 2 janoary 2021antoandro nihetsika tampoka tao amin’ny violon ny aretiny ka nangatahin’ny fianakaviany mba hotsaboina any amin’ny hopitaly saingy nanaiky izany ilay polisy nampiditra azy violon, araka ny fitantaran’ny fianakaviany hatrany. Efa nihombo anefa ny aretiny vao navelan’ity polisy hoentina any amin’ny hopitaly, kanjo namoy ny ainy nony tonga teny amin’ny hopitaly ity renim-pianakaviana ity. Manoloana ity raharaha ity, nangataka ny hanokafana fanadihadiana momba ity raharaha ity ny fianakaviana. Tonga tany an-toerana ny talem-paritry ny filaminam-bahoaka, ny kaomisera Mandiamanana Heriniaina nifampiresaka tamin’ny fianakaviana sy nampahery ny fianakaviana.Tsy miray tsikombakomba amin’ny ratsy ny polisim-pirenena…Nambaran’ity talem-paritry ny filaminam-bahoaka ity fa tsy miray tsikombakomba amin’ny ratsy ny polisim-pirenena ka tompon’ny fanapahan-kevitra amin’ny hataony ny fianakaviana ary efa nisy ny fepetra noraisina avy hatrany momba ity fahafatesana ity. Manoloana izany indrindra, namoaka fanambarana toy izao ny teo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka tamin’ny alalan’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka (MSP). Manoloana ny tranga namoizana renim-pianakaviana iray tany amin’ny distrikan’i Manandriana ny 2 janoary 2021. Ny minisitry ny Filaminam-bahoaka sy ny fianakaviamben’ny polisim-pirenena dia maneho fiaraha-miory amin’ny fianakavian’Itompokovavy ary mirary fiononana feno. Ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka dia efa nandray ny andraikitra tandrify azy ka nanokatra fanadihadiana anatiny teo anivon’ny inspection générale de la police nationale (IGPN) ho an’ilay polisy nampiditra violon ity renim-pianakaviana ity sy izay niray tendro taminy. « Ny polisim-pirenena dia miasa hatrany ao anatin’ny fanarahan-dalàna ka tsy miray tsikombakomba amin’ny polisy manao fahadisoana, manao fandikan-dalàna », hoy ny MSP.J.CL’article Polisy iray nanararao-pahefana…: renim-pianakaviana maty tao anaty «violon» a été récupéré chez Newsmada.